Nhoroondo - UP Boka
Muna 2003, UP Group-Shanghai UPG International yakavambwa neakakosha mabhizinesi eaya aimbova Ministry of michina indasitiri yeRepublic of China, ine timu yekunze yekutengeserana yevashandi vanopfuura makumi mana. Iyo inyanzvi yekunze yekutengesa kambani ye UP boka inotarisa kune bhizinesi rekutengesa kunze uye kupurinda, michina yepurasitiki nezvimwe zvinoshandiswa zvinoenderana, nezvimwe. Parizvino, kambani yakagadza yakagadzikana uye yakareba-yakareba zvine hungwaru kudyidzana hukama nevamiriri munyika dzinopfuura makumi mana. Zvigadzirwa zvedu zvinofukidza nyika dzinopfuura makumi masere mumakondinendi matanhatu epasirese uye kutumira kune dzimwe nyika dzinopfuura makumi mashanu pagore.
Isu tinotora tekinoroji uye mhando sehwaro uye kusangana nezvinodiwa nevatengi sechinangwa pamwe nesainzi manejimendi uye inoramba ichivandudza iyo inosanganisa kutsvagisa kwesainzi uye kusimudzira, kugadzira uye kushambadzira kwekutengeserana kwekunze kupa imwechete-yekumisa mhinduro uye neruzivo rwehunyanzvi hwekutsikisa mhiri kwemakungwa nekupakata, rabha uye epurasitiki indasitiri vatengi.
Jiangyin Huitong kudhinda uye Kupakata Machinery Co, Ltd., nhengo yeUP boka, ndiye mutungamiri weyemba inoshanduka kurongedza michina indasitiri.Izvigadzirwa zvinovhara muchina wekudhinda, lamination muchina, wekuongorora muchina, kucheka uye kudzoreredza muchina, epurasitiki bhegi kugadzira muchina, unhani muchina., nezvimwe izvo zvisina chete chikuru chigadzirwa kufukidzwa uye musika mugove muChina asiwo iri kuwedzera kutengesa chikamu gore rega rega, ine yakanaka mushandisi mukurumbira uye chigadzirwa chigadzirwa tarisiro. Uye zvakare, iyo kambani yakagadzika kwenguva yakareba nzira yekudyidzana pamwe neanopfuura gumi mabhizinesi ane simba muChina. Yakakura zvigadzirwa mhando uye kusangana kwemaindasitiri kunogona kupa zvimwe zvingasarudzwa kune vatengi vekunze.
Isu tinotarisira kuti vatengi vemhiri kwemakungwa vanosvika kwatiri uye tichaita zvatinogona kupa zvigadzirwa zvakavimbika uye sehupamhi hwebasa kusangana nezvinodiwa nevatengi